Iindaba - Izibonelelo zezempilo zepea protein powder
1. Inokukhuthaza ukusebenza kwezintso
Olunye uphononongo lucebisa ukuba iprotein ye-ertyisi inokuba yenye yezona zinto zingcono kubantu abaneengxaki zezintso.
Ngapha koko, ngokophando, ipea protein inokunceda ukulibazisa okanye ukuthintela ukonzakala kwezintso kwabo banexinzelelo lwegazi.
Inokunceda abantu abanesifo sezintso ukuba baphile ixesha elide ngokuzinzisa amanqanaba oxinzelelo lwegazi kwaye inokunyusa ukusebenza komchamo ukunceda umzimba ukuba uzisuse kwiityhefu kunye nenkunkuma ngokufanelekileyo.
2. Inceda ekunciphiseni ubunzima
Njengazo zonke iipowder powders ezilungileyo, ipea protein inokuba sisixhobo esiluncedo kwindawo yokugcina izixhobo.
Ngokukodwa, ukuba ujonge ukuphulukana neeponti ezimbalwa, ukongeza oku kulukhuni ekutyeni kwakho kwemihla ngemihla kuya kuba luncedo olukhulu kuwe nasemzimbeni wakho.
Kuqhelekile kubantu abafuna iindlela ezikhawulezayo zokunciphisa umzimba ukuze balibale ngokupheleleyo malunga nokutya iiprotein, ngokungathandabuzekiyo okubambezela ukwehla kobunzima kwixesha elide.
Nangona kunjalo, ukufumana phakathi kwe-0.8-1.0 yeeprotheyini ngekhilogram yesisindo somzimba ngosuku kukunceda wakhe izihlunu kwaye utshise amanqatha ngokukhawuleza.
Ukuba unobunzima beepawundi ezili-140, ezimalunga neekhilogram ezingama-64, umzekelo, kuya kufuneka utye phakathi kwe-51 kunye ne-64 yeeprotheyini ngosuku.
3. Ixhasa impilo yentliziyo
I-Pea protein ayilungelanga kuphela esinqeni sakho, kodwa ikwaxhasa intliziyo esempilweni.
Ngo-2011, imodeli yezilwanyana ngaphandle kweCanada yabika ukuba ipea protein yehlisa uxinzelelo lwegazi xa ikumanqanaba aphezulu.
Ngokuchukumisayo, iigundane kolu phando zibonise ukwehla okubonakalayo kwi-systolic kunye ne-diastolic yegazi kwiiveki nje ezisibhozo.
4.Yandisa ukutyeba kwezihlunu
Abantu abaninzi banembono ephosakeleyo ngokubhekisele kwinto ebizwa ngokuba yipowder powders yendalo yezityalo, njengoko uninzi lucinga ukuba aluloncedo konke konke okanye alunampembelelo ekukhuleni kwemisipha okanye ekubuyiseleni, ngakumbi emva koqeqesho, ke, qinisekisa ukuba kuphela iprotein ye-Whey elungileyo kuyo.
5. Amabhalansi amanqanaba eswekile yegazi
Iswekile ephezulu yegazi inokuchaphazela imiba emininzi yempilo yakho kwaye inokubangela iintlobo zeempawu zesifo seswekile, kubandakanya ukudinwa, ukoma okunxaniweyo, ukupholisa amanxeba kancinci, kunye nokwehla komzimba ngokungenanjongo.
Olunye uphando lubonisa ukuba zonke iiprotein zendalo ezongezekayo zeprotein ye-ertyisi inokuba luncedo xa kuziwa ekugcineni amanqanaba eswekile egazi.
I-protein ye-Pea ibonakaliswe ukuba ithathwa njengesithako esiluncedo kwaye inokukunceda ukuphucula ukulawulwa kwe-glycemic xa idibene nokunye ukutya.
Ukusetyenziswa kwePea Protein kwiNyango yeAyurvedic
Kutshanje, ipea protein yaba sisiseko seprotini esidumileyo nesiluncedo kwabo bafuna ukwandisa ukutya kwabo kunye nokuhlangabezana neemfuno zabo zesondlo.
I-ertyisi, nangona kunjalo, kudala isetyenziswa njengomthombo wesondlo kunye nokuphilisa kwiindlela ezininzi zamayeza emveli.
Kumayeza esiNtu amaTshayina, umzekelo, ii-ertyisi kucingelwa ukuba zikhuthaza imveliso yomchamo kunye nokunciphisa ukungaginywa ngelixa kuxhaswa impilo yokwetyisa kunye nokuxhasa rhoqo.
Okwangoku, ii-ertyisi zihlala zicetyiswa ngokutya kwe-Ayurvedic kuba kulula ukuzicola kwaye zinokunceda ukwanelisa isisu kunye nokugcina ukutya kungakhangeli.
Ngombulelo kumxholo wefayibha ephezulu, ii-ertyisi zikholelwa ukuba zisebenza njenge-laxatives ukunqanda ukuqhina kunye nokongeza isambuku esitulweni.
Ukufumana phi iprotein ye-ertyisi
I-Pea Protein Isolate ngoku inokufumaneka kwindawo yokutya esempilweni yevenkile ezinkulu, iivenkile zeziyobisi, kunye neevenkile ezincedisayo.
Ingathengwa kubathengisi abakwi-Intanethi, abanokuba luncedo ngakumbi ekufundeni nasekuthelekiseni uphononongo lweepea kunye nokufumana eyona mveliso intle.
I-ertyisi yobisi lwe-ertyisi ikwafumaneka kwiivenkile ezikhethekileyo zokutya njengezityalo ezinesondlo esekwe kubisi lwenkomo oluqulathe izixa eziphezulu zecalcium kunye neeprotein kunezinye iintlobo zobisi ezingenalo ubisi.
Ipea protein izalisa izikhewu ngamanye amaxesha ezifumaneka kwiprotein emdaka yerayisi (njengamanqanaba asezantsi e-lysine), kodwa zombini ziyi-100% ye-vegan kwaye inokukunceda uphephe iingxaki ezinokubakho zegesi ezinxulunyaniswa nezinye iintlobo zeeprothini.
I-protein powder ertyisi nayo isebenza kakuhle kuyo yonke into ukusuka kwiimpahla ezibhakiweyo ukuya kwi-snacks, i-dessert, kunye nokutya kwasekuseni, okwenza kube lula ukonyusa ukutya kwakho kweeprotein nangaliphi na ixesha losuku.
Ipea protein ithamo
Unokufumana iiproteins zepea kwiifom ezahlukeneyo. Ngelixa abaninzi bekhetha ukusebenzisa iproteni yokwahlulahlula, enokongezwa ngokulula kwi-protein-rich shakes kunye neeresiphi, ipea protein inokongezwa kwimivalo yeeprotein kunye nezongezo.
Kucetyiswa ngokubanzi ukuba abantu abadala abasempilweni bafumane ubuncinci iigram ze-0.8-1.0 zeprotheyini ngekhilogram ubunzima bomzimba. Eli xabiso lingahluka ngokubanzi ngokusekwe kwinqanaba lomsebenzi wakho, kunye nezinye iimbaleki ezinamandla ezifuna ukuya kuthi ga kwiprotein
Abantu abadala abadala kunye nabantu abaneemeko ezithile zempilo ezinje ngomhlaza, ukutsha, okanye ukonzakala okukhulu banokufuna izixa eziphezulu zeprotheyini.
Ngokubanzi, ukukhonzwa okuqhelekileyo kwepea protein powder malunga nepunipoon enye okanye iigram ezingama-33.
Nangona kunjalo, unokwahlulahlula eso sixa kwisiqingatha kwaye usidibanise nesiqingatha sokunikwa kwenye iprotein yomgubo, njengeprotein emdaka yerayisi, ukucoca uluhlu olubanzi lwee-amino acid kunye nezakha mzimba.
Ubungozi bePea Protein, izilumkiso, kunye neempembelelo zecala
Iprotein powder inokuba yindlela elula nefanelekileyo yokwandisa iprotein yakho xa usiya phantsi ngexesha okanye ufuna uncedo oluncinci lokuhlangabezana neemfuno zakho zemihla ngemihla.
Gcina ukhumbula, nangona kunjalo, ukuba umgubo weprotein akufuneki ubuyisele ngokupheleleyo iprotein evela kwimithombo yokutya.
Iiprotein zokutya njengenyama, intlanzi, inkukhu, amaqanda, kunye nembotyi zityebile kwiiprotein, kodwa zikwanazo nezinye izondlo ezibalulekileyo ezifunwa ngumzimba wakho.
I-protein ye-Pea ikhuselekile kubantu abaninzi kwaye ingadliwa kunye nomngcipheko omncinci weempembelelo. Nangona kunjalo, ukusebenzisa iproteni ngesixa esikhulu kunokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezininzi.
Ukuyigqithisa ngeprotein kunokubangela iingxaki njengokufumana ubunzima, ukwehla kwethambo, iingxaki zezintso kunye nokusebenza kwesibindi okungalunganga.
Gcina ukungenisa kwakho ngokumodareyitha ukuze uzuze kwizibonelelo ezizodwa zeprotein ngaphandle kokuyigqithisela okanye ukonakalisa impilo yakho.
Ikhukhi yeLadyfinger, Iibhiskithi zaBantwana, Ukutya amandongomane anetyuwa, Umtya weHawthorn, Iipakethi zesosi yeSoy, Intonga yeBhontshisi entsha,